Shell Scripting: Mamorona rakitra .desktop ho an'ny fampiharana portable | Avy amin'ny Linux
Shell Scripting hamoronana rakitra .desktop ho an'ny fampiharana azo entina
Bash Shell Scripting: Mamorona rohy amin'ny fampiharana azo entina.
Ny teny hoe Shell izay ampiharina amin'ny Operating Systems dia manondro ny mpandika teny an'ny Rafitra miasa. Amin'ny ankapobeny, izy io dia interface interface an-tsoratra avo lenta izay miseho amin'ny endrika Terminal (Console) ary miasa ho an'ny sehatry ny asa lehibe 3: Fitantanana ny Rafitra miasa, fampandehanana rindranasa ary fifampiresahana amin'izy ireo, ary fanompoana ho toy ny fandaharana fototra momba ny tontolo iainana. Ary ny Scripting dia manondro ny teknikan'ny famolavolana sy famoronana Scripts amin'ny alàlan'ny Shell.
Shell Scripts dia tena ilaina. Hevitra tsara ny manoratra ireo filàna anananay ary avy eo manamboatra script izay mahasoa antsika io. Ary amin'ity tranga manokana ity dia hampiasainay izy io hamoronana rohy fampiharana (hitsin-dàlana) amin'ny menio fanombohana sy ny birao misy ny fampiharana azo entina, azo tanterahina ary misy tena.
2 Mamorona ny programa amin'ny alàlan'ny Shell Scripting
Imbetsaka isika no nisintona sy nametraka rindranasa izay, na ao amin'ny toerana fitahirizam-bolan'ny GNU / Linux Distribution na tsia, rehefa mametraka na manatanteraka azy dia tsy mamorona ny rakitra .desktop tsirairay avy. ny mitovy na amin'ny tranga tsara indrindra dia tsy apetrany amin'ny làlana marina izany ka aorian'ny fanavaozana ny Start Menu dia vakiana sy aseho ao amin'ny lisitry ny fonosana napetraka ao amin'ny System Operating.
Noho izany dia mila miantso ny fampiasana rindranasa toa ny "Alacarte" na "Menulibre" izahay hamoronana tanana ny rohy tsirairay ao amin'ny Start Menu.
Ary na dia tena tsotra ampiasaina ho an'ity tanjona ity aza ireo rindran-tsary ireo dia tsy dia fantatra loatra loatra izany mamorona ny script-tsika manokana hanatanterahana an'io fandidiana io ary amin'izany dia fantaro avy ao anaty ny fomba anaovana ilay asa ao anaty ny Operating System.
Raha tsy mahazatra anao ny famoronana sy / na ny fampiasana rakitra Shell Scripting azonao atao vakio ity lahatsoratra teo aloha (Shell, Bash ary Scripts) para empezar ary avy eo raha ilaina hitrandrahana ny boky sy gazety rehetra momba izany.
Mamorona ny programa amin'ny alàlan'ny Shell Scripting
Hieritreritra isika noho ny antony habakabaka izay efa haintsika ny mamorona script hatramin'ny voalohany, izany hoe, efa haintsika ny mamorona lohateny sy ny ampahany voalohany amin'ny script-tsika ary handeha mivantana amin'ny atiny izahay.
Na izany aza, raha manana fisalasalana momba izany ianao dia jereo ity lahatsoratra teo aloha (Amboary tsikelikely ny programa ampiasainao amin'ny fampiasana Shell Scripting - Fizarana 1) hanazavana ny fisalasalana.
Votoatin'ny script ao amin'ny Mousepad
Satria azonao atao ny mamakafaka avy amin'ny kaody ary manala ny lohateny, ity script manaraka ity dia manatanteraka ireto fiasa manaraka ireto amin'ny fomba mandeha ho azy:
Manamarina fa ianao dia ampiasaina ho mpampiasa super root na fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa tena.
Fafao ireo rohy teo aloha tao amin'ilay rindrambaiko noforonin'ny kinova taloha.
Mamorona ilay rakitra .desktop (rohy) vaovao an'ny fampiharana ao anaty fampirimana azy ao anatin'ny tranon'ny mpampiasa.
Omeo alalana amin'ny tompon'ilay mpampiasa ilay rakitra noforonina.
Omeo alalana hamaky / manoratra / manatanteraka alàlana ny rakitra noforonina.
Mamorona rohy an'ohatra vaovao amin'ireo zotra ilaina.
Manavao ny menio fanombohana mba hampisehoana ny fisie .desktop noforonina.
Manatanteraka URL manokana amin'ny fampiharana noforonina.
Soso-kevitra ny hamoronana ity rakitra ity ao anaty fampirimana izay misy ny fampiharana / azo tanterahina am-panontaniana miaraka amin'ireo sary famantarana (sary / sary famantarana) voafaritra ao anatiny ary io fampirimana io dia hita eo amin'ilay lalana /opt fa tsy ny zotra `echo $HOME`/mi_app/ izany hoe, /home/mi_usuario/mi_app.
Manantena aho fa ity script kely ity dia mamela anao hamaha ny zavatra ilainao amin'ity lafiny ity! Mandra-pahatongan'ny lahatsoratra manaraka.
Mandritra ny famelako anao ity rohy ao amin'ny tranonkala Gnome ofisialy momba io lohahevitra io ary ity horonantsary ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Shell Scripting hamoronana rakitra .desktop ho an'ny fampiharana azo entina
Misaotra betsaka anao amin'ity lahatsoratra ity.
Fanontaniana iray: Ahoana, raha tsy miorim-paka ianao, azonao atao ve ny mangataka ny teny miafina asterisk izay hanohy ny famonoana miaraka amin'ny alalana sahaza azy?
Azonao atao ny mamorona interface miaraka amin'ny fifampiresahana ary mampihatra ny fananana manafina ny lakilen'ny boaty fangatahana teny miafina! Tsaroako tsara fa misy ity fananana ity amin'ny fifanakalozan-kevitra.
Amin'ity lahatsoratra teo aloha ity dia nisy olona nanao zavatra nitovy nefa tamin'ny sary fa ny rakitra apetaka, izany hoe, tsy misy intsony ny kaody ampiasaina: https://blog.desdelinux.net/script-avanzado-en-bash-bashmd5-para-proteger-algo-explicacion-detallada/
Misaotra, tsara raha tsy ilaozanao ny tontolon'ny bash raha sanatria mihodina tsy misy interface graphique, raha izany dia tsy maninona na tsy misy asterisk na zavatra hafa aza, mangataka ny lakile nefa tsy misy lahatsoratra hita . Ummm, hitako io http://www.tormentadebits.com/2012/08/scripts-bash-introducir-password-sin-mostrarlo-en-pantalla.html
Ahoana ny fametrahana Wordpress amin'ny Ubuntu 18.04 sy ny derivatives?